होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन ? - UjyaloNepal
होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन ?
बिस्व ब्यापि रुपमा फैलिरहेको कोरोना महामारि नेपालमा पनि प्रबेस गरिसकेको छ । नेपालमा दिन पर्ति संक्रमित दर बृद्दि भईरहेको छ ।
कोरोनाको समयमा धेरै बिरामीहरूलाई खाने र पिउने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । धेरै खाना बार्नु हुँदैन । तर यो भने महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं पौष्टिक खाना खाने र सकेसम्म घर बाहिर बनेको खानेकुराबाट टाढा रहनुहोस् । कोभिडको समयमा शरीरका लागि भिटामिन सी र जिंक महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
औषधिको साथसाथै यसलाई प्राकृतिक स्रोतबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । जस्तो सुन्तला, निम्बु, अण्डा र केरा प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्।
आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी, के खुल्छन्, के खुल्दैनन् ?
खुसिको खबर मध्य भोटेकोशी जलविद्युत्को आईपिओ निस्कासन मिति सार्बजनिक, कहिले र कति ?